It is me. Ko Niknayman.: မြန်မာပြည်သူပြည်သားများသို့ ပန်ကြားခြင်း
အခုဆိုရင် အာဇာနည်သံဃာတော်များရဲ့ ဦးဆောင်မှုကြောင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးနီးပါး ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပြီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ သပိတ်ပွဲကြီးဟာ အောင်မြင်မှုနဲ့ လက်တလှမ်းအကွာမှာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။
အဲဒိတုန်းက ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရဲ့သားနဲ့ ပွဲအဖျက်ခံခဲ့ရပါတယ်၊
တပ်မတော်သားတွေတောင် အမြင်မှန်ရသွားပြီး ပြည်သူတွေနဲ့စလက်တွဲခဲ့ကြပါတယ်
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ အထက်က သွေးခွဲထားတော့ သူတို့ကိုလူတွေမုန်းနေပြီလို့
၁၉ နှစ်လုံးလုံး ယုံကြည်ထားတဲ့ စစ်သားတွေဟာ လူထုနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့ နောက်တွန့်သိမ်ငယ်နေကြပါပြီ။
အခု သား နှစ် သား ကစတင်နေပါပြီ နောက်ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးသားကတော့စစ်သားပါ
ဒီသုံးသားပေါင်းမိရင် ဘယ်မင်းမဆို ကျဆုံးပါလိမ့်မယ်
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကို စစည်းရုံးကြရမယ်
သူတို့လဲလူထဲကလူတွေပါ၊ ခံစားတတ်ကြမှာပါ၊ ဒေါ်စုအိမ်ရှေ့ကအဖြစ်ကို ကြည့်နှိုင်ပါတယ်
ဒီတော့ သူတို့ကိုအထက်ကအကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းဖို့ အမိန့်ပေးလာတဲ့အခါ
ဒီတော့ခုချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့ စစ်သားတွေကိုစည်းရုံးကြရတော့မယ်။
“ ပြည်သူ့တပ်မတော် ငါတို့တပ်မတော် “ လို့ အကျယ်ကြီးအော်ပေးကြပါ။
Posted by Ko Niknayman at 6:17 AM